Taariikhda My Butros » Sida loo Cope Ka dib markii a Break Up
Fogeeya Ben ah & Jerry ee. Iyo sanduuq ee unugyada. Sababtoo ah waa waqti aad u hesho halkaas oo noloshaada ka dib wada. Waxaa la ma ay noqon doontaa sida qaar ka taataabtay film mucjisada ah meesha aad dhakhso u hesho in ka badan qof oo guurto on in ay soo socda in il biriqsi ah. Laakiin by tuuraan iyo maskaxdaada hayo firfircoon aadan u malayn doonaa sida ugu badan ee ku saabsan kor-joojin iyo waqti ka dareenka libdhi doonaa oo thread in aan la arki karin oo la jiqista qalbigaaga jebin doonaa iyadoo la kaashanayo soo socda saddex doorasho:
Haddii ay tahay in aad shaqo ama shaqo iskaa wax u qabso ama labada oo laysku qasay ama kulliyad ama waayo aragnimo shaqo, sii diiradda saaray in. Xusuusnow in waxyaalahan oo aad mustaqbalka iyo ha u ogolaan in qaar ka mid ah nasashada-up aad u hesho in sida ugu inkasta oo ay dareemi kara jiro aad u adag tahay waqtiga aan si. Sidoo kale suurto gal ah in aad qaadan karto fasalka fiidkii ah. Just ma dhibi naftaada ee geedi socodka. Laakiin waxa aad karti ugu tahay!
Waxaa hadal baxay dadka aad ka naxeyso. Iyadoo on a oo bushintiisa sarena ha adag dunida ka baxsan waxaa Ceeb ma aha in hoos jebinta iyo daynin dareenkaaga ku saabsan fasax-up vulnerably raacitaanka in qoyska iyo saaxiibada. Tani waxay baabi'in doontaa maskaxdaada iyo madaxa kuwa ilmada in ay yihiin inay Cadha daraadeed si aad u hesho in aad wax ka ogaato ama ma aad. Sidaas dad badan ay isku dayaan si ay ula qabsadaan jabsaday-up on iyaga u gaar ah oo ma ahan mid caafimaad qaba. Adigoo la hadlaya dad ku jeclahay oo ku saabsan waxa uu dhaawac kuu geysto markeeda waxaad awoodi doontaa inaad qaadato dunida oo dareen badan ifaya Anagaana ah indhaha dhalaal.
Waan ogahay in mararka qaar ayey adkaan kartaa in aad leedahay maad marka aad dhaawicidda. Laakiin isku day in aad ugu adkaa ee la riixo dhex sababtoo ah waxa ay noqon doontaa u qalantaa in dhamaadka. Bax (marka aadan ka qarxay!) , naftaadana u raaxaysatid qoyska ama saaxiibbada ee baar ah, at xaflado ama music, iwm … Iska daa dhibaatooyin aad guriga. Isku day xiiso iyo farxad leh hiwaayadaha sida reading, dhagaysiga muusigga, daawashada TV. Ha u ogolaan naftaada lumin jirtay qofka aad tahay, sababtoo ah marka aad samayn celinaya in aad soo noqon karo waddo adag. Qaado wakhtigaaga la helo jacayl cusub. Ha dareemin cadaadis qof inuu sidaa sameeyo. In wakhtiga aad rabtid, ha jacaylka ee.